Chii chinonzi Big Data Management uye Kukanganisa kwayo mu Analytics - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
guru Data Management ndiko kubata kwakanaka, kurongeka kana kushandiswa kwemazana akakura edata rakarongeka uye risina kurongeka iro riri musangano. Iyo inopa iyo kambani kuziva vatengi vayo zvirinani, kugadzira zvigadzirwa zvitsva uye kuita yakakosha sarudzo dzemari zvichibva pakuferefetwa kwehuwandu hwakawanda hwekambani dhata.
Kutaura nezve manejimendi inzira yakapamhamha iyo inosanganisira zvirevo, zviito, uye tekinoroji izvo zvinoshandiswa mukuumbiridza, kuchengetedza, kutonga, sangano, manejimendi, uye kuburitsa makuru makuru e data. Kunyangwe iyo inosanganisira yekuchenesa data, kutama, kusangana, uye kugadzirira kushandiswa mukuzivisa uye analytics.
Iyo inowanzo kubatanidzwa kune chirongwa cheData Lifecycle Management (DLM). Kuti uwane kuti ndeupi ruzivo runofanira kuchengetwa, panoteedzerwa nzira-inoteedzerwa mukati mesangano reIT nharaunda, uyezve panguva ipi iyo data inogona kudzima pasina njodzi.
Nezve manejimendi chinangwa vanhu vane akawanda akasiyana mazita mazita vangangobatanidzwa mune chairo bhizinesi. Dzinogona kunge dziine Chief Data Officer (CDO), Chief Information Officer (CIO), Dhata Mamaneja, Dhatabhesi Administrators, Dhizaina Dhizaina, Dhata Modelers, Dhata Masayendisiti, Dhata Warehouse Mamaneja, Dare Warehouse Vanoongorora, Bhizinesi vaongorori, Vagadziri nevamwe.
Izvo zvirimo zvave kutobata zvako here? Wobva watora nyowani kopi iko pano.
Big Data Management Maitiro
Kune akasiyana maitiro ano tevera uye anotsanangurwa pazasi kune imwezve kujekeswa.
Kuburikidza nepakati pesimba / dashibhodhi, kuongorora uye zvinoita kuti kuve nyore kwekushandisa kweese makuru data zviwanikwa.
Kuita Dhatabhesi kugadzirisa kwemhedzisiro hombe.
Kuita uye kuongorora yakakura data analytics, hombe kudhinda data, uye mamwe akafanana mhinduro.
Kuve nechokwadi chekuti dhizaini inokwanisa uye mashandiro eData Hupenyu -Cycle maitiro anoenderana nemhando yepamusoro mhedzisiro.
Kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kweBig Data zvinyorwa uye unomhanya kuwana.
Matekiniki senge data kudhizaina anoshandiswa kudzikisa huwandu hwe data uye kufambisira mberi mashandiro makuru e data nekukurumidza kubvumidzwa uye nenyaya shoma.
Dhijitari yekuona matekiniki kuti ishandiswe kuitira kuti imwechete data seti ishandiswe nemanyorerwo ekushandisa / vashandisi panguva imwe chete.
Kuti uve nechokwadi chekuti data rese rakatorwa uye rakachengetwa kubva kune zvese zvinhu sekuda.
Big Data Management Mabhenefiti:
Kuve nedata manejimendi kumasangano kwakakosha sezvo paine zvimwe zvakanaka pazviri. Vari:-
1. Wedzera mari.
Muongororo yeRuzivo, 61 muzana yeavo vakaongororwa vakati yavo Data management kuedza kwaive rubatsiro rwakakura kusangano mukuwedzera imomo mari. Uye zvakare, 82 muzana vakataura zvakanyanya kuti mhinduro dzemhando yepamusoro dzinobatsira mukuwedzera mari.
2. Sevhisi yevatengi yakavandudzwa:
Kuvandudzwa mabatiro evatengi yaive yechipiri-yakajairika kubatsirwa iri muchidzidzo chimwe chete icho chinodudzwa ne56 muzana yevakabvunzwa. Uye mune yechipiri mhando yeongororo iyo iri Ongororo yeIDG, iro rekutanga bhizinesi chinangwa cheakakura madhata edhisheni kwaive kushandira vatengi pamwe ne55 muzana yevakapindura vachisarudza icho chinangwa chepamusoro.
Kunyangwe isiri bhenefiti yakajairwa sekutengesa uye sevhisi sevhisi, kushambadzira kunoonawo kusimuka kubva manejimendi manejimendi. Experian vakawana kuti 39 muzana yevakabvunzwa vakati manejimendi manejimendi akasimudzira kushambadzira kwavo, uye yakakura 85 muzana vakati vakaona "kuvandudzwa mune zvine hungwaru uye zvakagadziridzwa kutaurirana kwevatengi" semhedzisiro ye data mhando zvirongwa.
4. Kubudirira kunowedzerwa:
Sekureva kweiyo Experian ongororo, 57 muzana yeavo vakaongororwa vakati kuchengeta yepamusoro-soro data rekubatsira kwakavabatsira kuwedzera kugona. Uye iyo 2017 MIT Sloan Management Ongororo mushumo "Ongororo seChitubu cheBusiness Innovation", iyo yaitsigirwa neSAS, yakaona kuti vamwe vatengi vaitarisira mamirioni emadhora pagore kusakwanisika kuwana semhedzisiro yemapurojekiti makuru edata.
5. Mari yekuchengetedza:
Yakazara makumi matatu neshanu muzana yeavo vakatora chikamu muRuzivo vane ruzivo rwekuchengetedza mari. Saizvozvowo, muongororo yeNewVantage, 38 muzana yeavo vakaongororwa vakati kuyedza kwavo kukuru kwedatha kwakavabatsira kudzikisa mari.
6.Mashandisirwo matsva anogoneswa:
Anecdotally, masangano akataura kana mafemu aine chivimbo chakanyanya mune yavo data iyo inokwidziridza yavo yekuvandudza uye inovakurudzira kuti vaite mafomu matsva. Muongororo yeNewVantage, makumi matanhatu neshanu muzana evatungamiriri vakaongororwa vakati vaitarisa dhata hombe kuti vagadzire nzira nyowani dzekuvandudza, uye 64.5 muzana vakawana budiriro munzvimbo ino.
7. Yakagadziridzwa kunyatso kweAnalytics:
Iyo inonyanya kukosha mukana we data manejimendi maitiro ndeyekuti inomutsa iko kururamisa uye kuvimbika kwemahombe data analytics. Yakanaka dhata inouya mune ye analytics mhinduro inoita kuti sangano rikodzere nehunhu bhizinesi ruzivo runobuda kunze kwetsananguro.
Zvinoenderana neshumo yeMIT, 57 muzana yemasangano anoshandisa analytics akataura mukana wakanaka. Hunhu hukuru Data management kurovedza muviri kunotendera iyo analytics, iyo inobvumawo makambani kutyora vezera ravo.
Matambudziko eData manejimendi anokundwa sei nesangano uye nekuwedzera mukana kubva mukuedza kwavo? Maitiro akati wandei akanakisa anokurudzirwa nenyanzvi. Vari:-
Kubva kumadhipatimendi ese mukuedza kwedata manejimendi mitezo yakarongedzwa- Nzira yekunyora inosanganisirwa mukutonga kwedata kunobatsira mukugadzira marongero uye nekushandura tsika yemasangano isiri kungopa simba muhunyanzvi. Kuti uwane budiriro mune izvi kuedza, zvinobatsira kuve nevazhinji vevatori vechikamu vane chekuita nenzira iyi sezvingabvira. Nhengo dzeIT timu, pamwe nevatori vechikamu kubva kudivi rebhizinesi uye, chokwadika, mukuru anotsigira, vanobviswa mairi.
YeData Lifecycle Management zano rakanyorwa uye marongero akagadzirwa. Kuva nemutemo wakanyorwa kunoita kuti zvive nyore kwazvo kuti mutemo uzoshandiswa zvese kuburikidza nesangano. Uye zvakare, masangano mazhinji anofanirwa kunge aine yavo Dhata Lifecycle Management maitiro mukunyora kuitira zvinangwa zvekucherechedza.
Ziva uye chengetedza data rakaomarara. Mumashoko ezuva nezuva ekurwiswa necyber uye kutyora dhata masangano ari kuziva kupfuura nakare kose kwekudzivirira bhizinesi neruzivo rwevatengi. Dhijitari manejimendi zvikwata zvinofanirwa kuve nechokwadi chekuti data rese rakaomarara mumasisitimu avo rakachengetedzwa zvakakwana uye kuti zvikwata zvekuchengetedza dhata zviri kutevedza nzira dzekupedzisira dzinofungidzirwa nemaitiro.
Nzira yekuongorora inoendeswa kune yakasimba kuzivikanwa uye yekuwana manejimendi manejimendi icho.Chikamu chikuru chechero data security chirongwa ndechekuona kuti vashandi vane mvumo chete ndivo vanogona kuona kana kufambidzana neyakajeka data, pamwe nekuchengetedza track yeakaona kana kushandisa iyo data uye riinhi. Zvekare, izvi zvinodzora zvinogona zvakare kuve zvakakosha kune zvekutarisira zvinangwa.
Investment inoitwa mukudzidziswa kwevashandi. Big data nyanzvi dzinodhura uye dziri shoma, zvine musoro kuchengetedza hombe dhata tarenda kubva mukati. kusevha vashandi varipo kuwana hukuru hwedata hunyanzvi kunogona kuve kukunda-kukunda kwekambani nemushandi.
Bvumira kugovana dhata pasangano rako rese. “Makambani anogoverana data mukati anowana kukosha kwakanyanya kubva kuma analytics avo. "" maererano neshumo yeMIT.
Funga kugadza mukuru wedhata (CDO). Iri rakasarudzika basa riri kuramba richiitika zvakanyanya mumabhizinesi makuru. Iyo NewVantage Ongororo yakaona kuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana kubva muzana zvevakuru vakuru vakaongororwa vakati sangano ravo rine CDO. Paakabvunzwa nezve izvo CDO inofanirwa kuita, 55.9 yakati iye anofanira kugadzira hunyanzvi uye dhata tsika, nepo 48.3 muzana vakati CDO inofanira kubata dhata seyemabhizimusi pfuma. Pasina zvikamu zvina kubva muzana vakati basa racho rakanga risingakoshi.
Kana isu tichitaura nezve tekinoroji, masangano ane akati wandei emhando dzakasiyana dzemadhizaini ekugadzirisa mhinduro kusarudza kubva. Vatengesi vanopa huwandu hwenzvimbo dzakazvimiririra kana dzakasiyana-siyana dhizaini yekushandisa maturusi, uye mazhinji masangano anoshandisa akawanda maturusi. Dzimwe dzedzinowanzoitika mhando dzeakakura ekugadzirisa manejimendi kugona anosanganisira anotevera:
Kuchenesa data: Finding uye kugadzirisa zvikanganiso mumadhata seti yakafukidzwa mukati Kuchenesa data.
Kubatanidzwa kwedata: Kubatanidza data kubva kune maviri kana anopfuura masosi
Dhata kutama: Inokanganisa data kubva kune imwe nharaunda kuenda kune imwe, senge yekufambisa dhata kubva mu-dzimba dhata nzvimbo kune iyo gore
Kugadzirira kwedata: Kugadzira iyo data yakagadzirira kushandiswa mune analytics kana kumwe kunyorera
Dudziro yedata: Kuwana zvirinani kunaka kwedata nekuwedzera matsva e data, kugadzirisa zvikanganiso zvidiki kana kuburitsa ruzivo rutsva kubva kune yakasviba data
Dhata analytics: Kuongorora data neakasiyana maalgorithms kuitira kuti wedzera nzwisiso
Dhata mhando: Kugadzira chokwadi data iri chaiyo uye yakavimbika
Master data manejimendi (MDM): Kubatanidza rakakosha bhizinesi dhata kune imwe tenzi seti inoshanda seimwe chete sosi yechokwadi yesangano
Kutonga kwedata: Kuita kuti kuve nekuwanika, kushandiswa, kuvimbika, uye kurongeka kwe data kunouya pasi pekutonga kweData.
Bvisa chinja mutoro (ETL): Kufambisa dhata kubva kune mupenyu mupenyu kune dhatabhesi kana Dhata yekuchengetera
Une chirongwa cheBig Data mumusoro? Wobva wasvika kwatiri kuti ubvunze mahara.